Apple waxay soo sheegi doontaa natiijooyinkeeda maaliyadeed ee ugu wanaagsan taariikhda | waxaan ka imid mac
Apple waxay ku noqotay mudnaanteeda shirkadda leh qiimaha suuqa ugu sarreeya. Ma aha nasiib, ee waa shaqo iyo dadaal joogto ah oo u horseeday inuu booskaas 1aad galo. Maskaxda ku hay in mar kasta oo taariikhda ku dhawaaqida natiijadaada maaliyadeed ay soo dhawaato, la filayo in ay ka fiicnaan doonto kuwii hore. Laakiin waxa beryahan dambe ka dhacaya tirooyinka waa wareer. Shirkaddu kuma sii socoto oo keliya booska lambarka XNUMX laakiin sidoo kale waxay xoojisaa faa'iidada inta kale. Tirooyinka cusub ayaa la filayaa inay noqdaan kuwii ugu fiicnaa taariikhda.
Berri oo Khamiis ah, Apple ayaa soo sheegi doonta natiijooyinkeeda maaliyadeed ee cusub ee saameeya rubuci ugu dambeeyay waxaana la filayaa in tirooyinka ay ku heshiiyaan maamulka shirkadda. Waxaa la filayaa inay noqoto rubuci ugu fiicnaa taariikhda shirkadda. Falanqeeyayaasha Wall Street waxay qiyaaseen celcelis ahaan in shirkadda Maraykanku ay soo sheegi doonto dakhliga 118.300 bilyan oo doolar rubucii. Tiradani waxay ka dhigan tahay dakhliga rubucii biloodlaha ah marka la barbar dhigo tirooyinka warbixinadii hore. Tani waxay ka badan tahay 111.400 milyan oo doolar oo ay heshay rubuci sanadkii hore.
Qaar badan oo ka mid ah waxay ahaayeen aaladaha shirkadda oo ka caawiyay inay rumoobaan tiradan cusub ee rikoodhka ah. Noocyada cusub ee iPhone 13. Apple Watch Series 7, jiilka lixaad iPad mini iyo jiilka sagaalaad iPad. Aad ayey muhiim u ahaayeen jiilka saddexaad ee AirPods. Laakiin waxaa ka sii sarreeya, wax ku soo booday tayada iyo tirada ayaa ahaa soo saarista moodooyinka cusub ee 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro. Ma iloobi karno HomePod mini.
In kasta oo shirkadu aysan siinin tirooyinka iibka mid kasta oo ka mid ah qalabkan, waxaan ognahay in iPhone 13 uu wali kor saaran yahay, laakiin macs sanadkan, waxay ahaayeen xiddigaha dhabta ah ee leh chips-yada M1 ee la cusboonaysiiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple si ay u soo sheegto natiijooyinkeeda maaliyadeed ee ugu fiicnaa abid
New Unity Lights sphere si ay u taageerto cadaalada iyo sinnaanta jinsiyadda